Waa Maxay Adeegyada Macaamiisha Yar ee Ganacsiga ee ugu yar?
Xulashada adeegga SEO ee saxda ah ee ganacsiga yaryar ayaa noqon kara mid caqli gal ah. Haddii aad tahay mid ka mid ah ganacsatada aan go'aansan karin qalabka SEO-yada inay doortaan, markaa waa inaad hubisaa maqaalkan soo socda.
Macluumaadka hoos ku qoran ayaa kaa caawin doona inaad fahamto waxa qalabka SEO ee ganacsiyada yaryar oo dhan ku saabsan. Ka dib markaad akhrisid boostada, waxaad shaki badan ku jiri doontaa markaad dooranayso adeegga SEO ee ganacsigaaga. Markaa, udhow dhibicda.
Adeegyada Macaamiisha ee ugu Taajirsan ee Ganacsiga yaryar:
Muhiimadda Cilmi-baarista Kelmadaha
qaybta ugu muhiimsan ee mashruuc kasta oo SEO ah tan iyo markii uu u adeego saldhigga dhammaan raadinta mashiinka raadinta. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ka fekereyso marka aad abuurayso qorshe si loo hagaajiyo darajooyinkaaga ayaa sameynaya cilmi-baadhis qotodheer oo muhiim ah kaas oo kaa caawin doona qeexitaanka keywords keywords. Fikrad ahaan, bog kasta ee boggaaga ku yaala domainka waa inuu bartilmaameedsadaa ilaa laba eray oo muhiim ah oo gaar ah. Hubi inaad haysatid bogag ku filan, bartilmaameed muhiim ah oo muhiim ah, si aad u daboosho meelaha muhiimka ah ee ganacsigaaga. Raadi ereyada muhiimka ah ee gawaarida raadinta. Nidaamka xulashada qodobbada saxda ah ayaa la dhimayaa saddexda talaabo:
Go'aaminta qodobbada muhiimka ah;
Go'aaminta tirada dadka raadinaya ereyga muhiimka ah ee laga doorto joqraafigaaga adeeggaaga;
Go'aaminta tartanka tartan ee muhiimka ah.
Qodobbada muhiimka ah ee ujeedada ganacsigu waa inay ahaato mudnaantaada ugu sareysa. Sida iska cad, dad badan ayaa raadinaya ereygaaga muhiimka ah, ka sii wanaagsan. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la sheego in tartanka hoose laga doorbido - waxay u baahan tahay waqti iyo lacag yar si guul loo gaaro. Khabiirada hooseeya waxay kugula talinayaan inaad doorato Wordtracker si loo sameeyo cilmi-baaris. Intaa waxaa dheer, in ay sax noqoto, way fududahay in la isticmaalo.
Markaad ku dhameysato cilmi-baaris dhamaystiran oo muhiim ah, tallaabada xigta waa inaad ka fekertaa waa abuurista boggag cusub oo cusub si loogu darajeeyo ereyo muhiim ah. Markaad abuurayso bog cusub, iskuday inaad ku guulaysato hadafyada soo socda:
Bogagga shabakadaadu waa inay ahaadaan muddo dheer (ilaa hal kun eray);
Bog kasta wuxuu u baahan yahay inuu lahaado mid gaar ah oo qiimo leh;
Hubso in bog kasta uu wax ka qabanayo baahiyaha aqristaha;
Ka dhig URL-yadaada sahlan oo kooban. Waa inay kudhowaan xididka domainka;
Xasuuso qawaaniinta lagu beegsanayo inaan ka badnayn laba erey oo muhiim ah bog kasta.
. Si fudud u dhig, waa inaad ku hagaajisaa bogaggaaga bogagga makiinadaha raadinta. Ka dib oo dhan, mashiinnada raadinta waa kombuyuutarro, iyo hadafkaaga waa inuu hubiyo inay fahmi karaan mawduuca boggagaaga. Sidaas darteed, samaynta wax ka beddelka mawduuca iyo sidoo kale sameynta cusbooneysiin farsamo ee bogaggaaga internetka waa shuruud.
Noocaan noocan ah waxaa lagula talinayaa ganacsiyada yaryar maaddaama ay tahay mid la awoodi karo marka la abuuro bog cusub oo ka soo xoqaya. Waxay badanaa dhacdaa in boggu uu u baahan yahay isbedel yar si uu si fiican u fahmo makiinadaha raadinta, sida abuurista astaanta cinwaanka ah ee la xidhiidha amaba saxda ah ee qoraalka.
Marka xulashada adeegga SEO ugu fiican ee ganacsigaaga yar, hubso inay ku jiraan waxyaalahan SEO sida baaritaanka ereyga muhiimka ah, abuurista bogga, iyo naqshadaynta bogga. Dhismaha xidhiidhka iyo xisaabinta farsamada ayaa sidoo kale qiimeynaya dareenka. Adeecida hagaha soo socda ayaa ku sii wadi doona jidka saxda ah iyo hubinta ganacsigaaga yar ee aan loo qaadin gaadiidka Source .